Microstation: Bubata nhazi na nkọwa site na Excel - Geofumadas
Microstation: Mbubata mbubata na nkọwa si Excel
Nọvemba, 2013 GPS / Equipment, Microstation-Bentley
Ikpe: Enwere m data site na Promark 100 GPS, na site na iji ngwa GNSS ngwa ngwa na ngwaọrụ ndị a nwere, M nwere ike izipu ozi na Excel.
Ogidi ndị e depụtara na edo edo bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ, ngalaba ebe ugwu na ọkwa aha ha; ihe fọdụrụ bụ naanị ozi gbasara nhazi.
Nsogbu: Achọrọ m ka ndị ọrụ na nsụgharị nke Microstation ha nwere mbubata data.
Ụzọ na-adịghị mma iji mee ya
Ọ bụrụ na ibubata nhazi na Microstation na iwu nyere maka nke a, naanị isi ihe na-abịa, ọ bụghị aha mmado. Site n'ụzọ dị ogologo, onye ọrụ na-ebubata ha na CivilCAD nke na-eme ya n'ụzọ dị egwu, wee si na Microstation meghee ya wee gbanwee ya na dgn nke bụ usoro ebe ha na-arụ ọrụ kwa ụbọchị. Ya mere… ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka m gaaEnwere m ekele na ị rịọrọ m maka aro otu esi eme ya; ọ bụ ezie na n’ime ala m chere na ha na-eme ya iji gosipụta na iwu anaghị ajari. Ọ bụ naanị usoro ahụ m kọwara tupu na AutoCAD.
Otu esi ejikọta Excel
Ime vba ga-adị mma, ma dịka omenala nke otu ụbọchị anyị kwubiri: Excel kwesịrị ịdị na-arụpụta karịa imepụta akwụkwọ, ebe a na-ejikọta iwu Microstation (isi na) na iwu Excel (concatenate)
Mepụta ntụpọ na Microstation ka ejiri iwu "ebe dị" mee ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ya na nhazi a kapịrị ọnụ, jiri "xy =", na-eji onye nhazi ihe mgbe niile, nke bụ semicolon (;). N'ihi ya, mgbe ị na-abanye iwu ahụ ebe ebe; xy = 388218.835,1566315.816 M kwesịrị ịpụta ihe dị na nhazi ahụ.
N'ihe banyere Excel, iwu nkwekọrịta na-arụ ọrụ dị ka nke a: iwu a na-emechi ọnụ, mmeghe na-emeghe, mgbe ahụ na-egosi ihe niile a ga-eme ka ọ bụrụ nke a na-emechi, na n'ikpeazụ mechie nne na nna. Ana m akọwa ya n'ụzọ doro anya, mana ọ dịghị mgbagwoju anya mgbe a ghọtara ya ma mee opekata mpe:
Iwu nkwekọrịta = CONCATENATE anyị na-emeghe parentheses ( mgbe ahụ iwu iwu ahụ bụ ederede, ya na semicolon nke na-ekewa iwu ahụ «Ebe ntụpọ;» mgbe ahụ ị ga-ekewapụta ọnya ọzọ , mgbe ahụ iwu ahụ na-ekwu okwu dị ka ọ bụ ederede «Xy =» akara ahụ na-egosi eriri ọhụrụ , ma ebe a ka anyị na-ahọrọ cell dị iche iche C3 mgbe ahụ na njirimara iji gosi eriri ọhụrụ , na mkparịta ụka na ntinye maka nkewa nke nhazi «,» akara ahụ na-egosi ọnye ọzọ , sel nke nwere nghazi ugwu na nke semicolon ikpeazụ D3,«;» Anyị mechie parentheses )
Ọ ga - adị ka nke a:
= IKWUO («ebe ebe ;«, »xy =«C3, »,«D3, »;")
Ozugbo a mechara nke a, anyị na-edepụta usoro ahụ na kọlụm ndị a, dị ka ndị a:
ebe a; xy = 388218.835,1566315.816;
ebe a; xy = 388219.911,1566320.28;
ebe a; xy = 388216.28,1566320.868;
ebe a; xy = 388215.36,1566316.473;
ebe a; xy = 388211.706,1566317.245;
ebe a; xy = 388212.713,1566321.593;
Otu esi eziga ya na Microstation
E nwere ike idegharị ederede ahụ ma tinye ya kpọmkwem na akara iwu (igodo ndị ọrụ) na hụ na isi ihe ndị a adọrọ mmasị.
Mana m nwekwara ike idetuo ya n'ime faịlụ txt ma ọ bụ csv nke m nwere ike ịkpọ dịka edemede.
Dịka ọmụmaatụ, a na-akpọ faịlụ ahụ phobiafreedom.txt, ọ na-echekwa na C; wee kpọọ ya ka ị pịnye igodo ahụ @c: \_ sweetpots.txt. Aha ahụ ekwesịghị inwe oghere, ọ ka mma itinye ya na ụzọ dị mfe.
Esi tinye mbubata
Ọ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ, na ọdịiche dị na iwu ahụ abụghị isi ma akara ngosi akara ngosi: ebe ederede akara
Concatenamos nke nha anya, akara ngosi ederede iwu, cell nke nwere ederede, nhazi ebe ederede ga-etinye:
= IKWUO («ebe ederede akara ngosi;», B3, »;
Mgbe ahụ, anyị ga-adị ka nke a.
ebe ederede akara; 10; xy = 388218.835,1566315.816;
ebe ederede akara; 11; xy = 388219.911,1566320.28;
ebe ederede akara; 12; xy = 388216.28,1566320.868;
ebe ederede akara; 13; xy = 388215.36,1566316.473;
ebe ederede akara; 14; xy = 388211.706,1566317.245;
ebe ederede akara; 15; xy = 388212.713,1566321.593;
Ma n'ebe ahu ka ha nwere ya:
Iji mee ka ọ gafee, a ga-eme otu ihe ahụ, mana ya na usoro iwu, yana ịkpachara anya na isi ihe ahụ ga-enwe usoro; nke abụghị ikpe a. Ọ ga-abụ akara ebe a ga - enye iwu, bido ịchịkọta, ebe njedebe na - aga ...
O doro anya na e nwere ụzọ ndị ọzọ ịme ya, yana mmemme mmemme mepere emepe na-eme ya n'ụzọ magburu onwe ya. Ma mmega ahụ bara uru iji mee ka uche m gbanwee ma na m, gbochie iwu m ka nchara.
Previous Post«Previous Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ leta ikpeazụ nye ndị ọrụ m ... ahapụghị m
Next Post Dezie Post FormatNext »
6 Na-aza "Microstation: Bubata nhazi na nkọwa site na Excel"
Jenụwarị, 2018 na
Nju Enweghị m
Ekele Wilson. Obi dị m ụtọ ịmara na ị hụrụ na ọ bara uru.
Enweghị m ihe omume a ma ọ bụ aka, mana ị ga-etinye iwu zuru ezu, dịka RADIUS RỤKWU.
Orlando Gonzalez kwuru, sị:
Ndewo enyi, ozi magburu onwe ya, ejiri m ike izu ike na ọbụna dozie ọnọdụ ndị m chere na enweghị ike ịme na microstation, enwere m ajụjụ metụtara isiokwu a tụlere n'elu gị, kedu ka m ga-esi webata okirikiri kama ịkọwapụta nke ọma ? Emere m usoro niile a kpọtụrụ aha n’elu iji ihe: = CONCATENATE («ebe gburugburu;… ..) wee banye na .txt ma mesịa kpụrụ ya gaa dị ka @d: \_ Circle.txt, mana enwebeghị ike ịse ha, ị nwere ike nyere m aka na nke a?
gerardo palafox rico kwuru, sị:
Ndewo, ụtụtụ ọma, m ga-achọ ịma ma ị nwere nkuzi ma ọ bụ detuo etu esi eme post-nhazi maka nkwa 200 gps na mmemme GNSS? Anọ m na-agba mbọ ụbọchị ole na ole mana enweghị m ike n'ihi na GPS na-atụ m ụdị faịlụ .csv ... echere m maka azịza gị.
Wilson Borjas kwuru, sị:
Ọ dị mma, ọ dị mma, a na m agwa gị na ndị meriri ahụ abịaghị n'ogige ahụ ma mgbe m rutere, achọrọ m ịmasị ha site na enyemaka ha, kama ha megharịrị ihe ndị ọzọ, ụjọ tụkwara m ịjụ ha ozugbo otu ha siri mee ... hehe na-ekwu Victor, anyị na-achọ ya na geofumadas ... Ọ dị mma na ọ na-akwado anyị oge niile n'ihi na ọ bụ nna m ukwu na nke a, emeghịkwa m ya site na ule m mere ya n'ihi na m hụrụ na ha nwere ike ịghọta obere ma ọ bụ ihe ọ bụla na nloghachi nke a ga-eme na civilcad mana n'ezie onye ọ bụla nọ na ogbako ahụ nwere mmasị ...
ndị a na-enyere anyị aka ịmepụta njupụta dị ukwuu n'ọtụtụ puku aghụghọ a pụrụ iji PC rụọ, mana nduzi dị mkpa mgbe niile iji nwee ike ịmụta ha ..
n'ihi ndị na-eji nkà na ụzụ chọọ gị, n'ihi na naanị m ga-agwa gị ihe dị mma bụ cheese.